Nampanantena Jehovah - www.yomelijah.com
Ny Baiboly amin'ny Internet
Ny fehezanteny amin'ny manga (eo anelanelan'ny andalana roa), manome fanazavana fanampiny ao amin'ny Baiboly, tsindrio fotsiny. Ny lahatsoratra ara-Baiboly dia nosoratana tamin'ny fiteny efatra: anglisy, espaniola, portogey ary frantsay. Raha hosoratana amin'ny teny malagasy izany dia atao voafaritra
Ny teny fikasan'Andriamanitra
"Ary hataoko mifandrafy ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany. Hanorotoro ny lohanao izy io, ary ianao kosa handratra azy eo amin’ny voditongony"
Azafady tsindrio ny rohy mba hijery ny famintinana ilay lahatsoratra
Ny ondry hafa
"Manana ondry hafa tsy ato amin’ity vala ity aho. Ireny koa tsy maintsy hoentiko, dia hihaino ny feoko. Ho lasa andiany iray izy ireo sady ho iray ihany ny mpiandry azy"
Ny famakiana amim-pitandremana ny Jaona 10:1-16 dia mampiseho fa ny foto-kevitra fototra dia ny famantarana ny Mesia ho tena mpiandry ny ondry, ny mpianany.
Izao no voasoratra ao amin’ny Jaona 10:1 sy Jaona 10:16 : “Lazaiko marimarina aminareo fa izay tsy miditra eo amin’ny vavahadin’ny valan’ondry, fa mianika any an-toeran-kafa, dia mpangalatra sy mpandroba. (...) Manana ondry hafa tsy ato amin’ity vala ity aho. Ireny koa tsy maintsy hoentiko, dia hihaino ny feoko. Ho lasa andiany iray izy ireo sady ho iray ihany ny mpiandry azy”. Io “valan’ondry” io dia maneho ny faritany nitorian’i Jesosy Kristy, ny firenen’ny Isiraely, araka ny teny manodidina ny lalàn’i Mosesy: “Nirahin’i Jesosy izy 12 lahy, ka nomeny toromarika hoe: “Aza mankany amin’ny firenen-kafa, ary aza miditra ao amin’ny tanànan’ny Samaritanina mihitsy. Any amin’ny ondry very eo amin’ny taranak’Israely ihany mandeha"” (Matio 10:5,6). “Dia hoy i Jesosy: “Ho any amin’ny ondry very amin’ny taranak’Israely ihany no nanirahana ahy"" (Matio 15:24).
Ao amin’ny Jaona 10:1-6 dia voasoratra fa niseho teo anoloan’ny varavaran’ny valan’ondry i Jesosy Kristy. Izany no nitranga tamin’ny fotoana nanaovana batisa azy. Ny “mpiandry vavahady” dia i Jaona Mpanao Batisa ( Matio 3:13 ). Tamin’ny nanaovany batisa an’i Jesosy, izay tonga Kristy, dia nanokatra ny varavarana ho azy i Jaona Mpanao Batisa ary nanambara fa Jesosy no Kristy sy
Zanak’ondrin’Andriamanitra: “Ny ampitson’iny, dia hitany nanatona azy i Jesosy, ka hoy izy: “Iny ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manala ny fahotan’izao tontolo izao!"” ( Jaona 1:29-36 ).
Ao amin’ny Jaona 10:7-15 , na dia nitoetra tao amin’ilay foto-kevitra momba ny Mesia iray ihany aza i Jesosy Kristy, dia nampiasa fanoharana hafa iray tamin’ny fiantsoana ny tenany ho “Vavahady”, ilay hany toerana hidirana amin’ny fomba mitovy amin’ny Jaona 14:6: "Hoy i Jesosy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako". I Jesoa Kristy ho Mesia foana no lohahevitry. Avy amin’ny andininy faha-9, ao amin’io andalan-teny io ihany (manova fanoharana izy), dia milaza ny tenany ho mpiandry miandry ny ondriny izy amin’ny fanaovana azy ireo “hiditra na mivoaka” mba hamahana azy ireo. Sady miompana aminy ny fampianarana sy amin’ny fomba tokony hikarakarany ny ondriny. I Jesosy Kristy dia manendry ny tenany ho mpiandry tena tsara izay manolotra ny ainy ho an’ny mpianany sy tia ny ondriny (tsy toy ny mpiandry karama izay tsy manao vivery ny ainy ho an’ny ondry tsy azy). Ny tena ifantohan’ny fampianaran’i Kristy indray dia ny tenany amin’ny maha-mpiandry ondry Azy izay hahafoy tena ho an’ny ondriny (Matio 20:28).
Jaona 10:16-18 : “Manana ondry hafa tsy ato amin’ity vala ity aho. Ireny koa tsy maintsy hoentiko, dia hihaino ny feoko. Ho lasa andiany iray izy ireo sady ho iray ihany ny mpiandry azy. Tia ahy ny Ray satria mahafoy ny aiko aho mba hahazoako azy io indray. Tsy misy manala ny aiko amiko, fa izaho no mahafoy azy io an-tsitrapo. Manana fahefana hamoy ny aiko aho, ary manana fahefana hahazo azy io indray. Izany no didy azoko tamin’ny Raiko”.
Tamin’ny famakiana ireo andinin-teny ireo, tamin’ny fiheverana ny teny manodidina ny andininy teo aloha, dia nanambara hevitra revolisionera i Jesosy Kristy tamin’izany fotoana izany, fa tsy ho an’ny mpianany jiosy ihany no hataony sorona, fa ho an’ny tsy Jiosy koa. Ny porofo dia izao: Ny didy farany omeny ny mpianany momba ny fitoriana dia izao: “Hahazo hery kosa ianareo rehefa tonga aminareo ny fanahy masina, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary any amin’ny faritra lavitra indrindra eto an-tany ianareo” (Asa 1:8). Amin’ny batisan’i Kornelio indrindra no hanombohan’ny fahatanterahan’ny tenin’i Kristy ao amin’ny Jaona 10:16 (Jereo ny fitantarana ara-tantara ao amin’ny Asan’ny Apostoly toko faha-10).
Noho izany, ny “ondry hafa” ao amin’ny Jaona 10:16 dia mihatra amin’ny Kristianina tsy jiosy ara-nofo. Ao amin’ny Jaona 10:16-18 , dia milazalaza ny firaisan-kina eo amin’ny fankatoavan’ny ondry an’i Jesosy Kristy Mpiandry ondry izy io. Nilaza toy ny “ondry vitsy” koa izy momba ny mpianany rehetra tamin’ny androny: “Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny Fanjakana” (Lioka 12:32). Tamin’ny Pentekosta taona 33, dia 120 monja ny mpianatr’i Kristy (Asan’ny Apostoly 1:15). Ao amin’ny tohin’ny fitantarana ao amin’ny Asan’ny Apostoly, dia hitantsika fa hiakatra ho arivo vitsivitsy ny isan’izy ireo (Asan’ny Apostoly 2:41 (3000 fanahy); Asan’ny Apostoly 4:4 (5000)). Na izany na tsy izany, ny Kristianina vaovao, na tamin’ny andron’i Kristy na tamin’ny andron’ny apostoly, dia nisolo tena ny “ondry vitsy” raha ny amin’ny fitambaran’ny vahoakan’ny firenen’Isiraely sy ny firenena hafa rehetra tamin’izany fotoana izany.
Aoka isika hiray saina araka ny nangatahin’i Jesosy Kristy tamin’ny Rainy
“Tsy mangataka ho an’ireto ihany anefa aho, fa ho an’izay mino ahy koa noho ny tenin’izy ireo, mba ho iray izy rehetra, hoatr’anao Ray tafaray amiko ary izaho tafaray aminao, dia ho tafaray amintsika koa izy ireo, amin’izay dia hino izao tontolo izao hoe ianao no naniraka ahy” (Jaona 17:20,21).
Inona no hafatr'ity ankamantatra ity? Mampahafantatra i Jehovah Andriamanitra fa ho tanteraka ny fikasany (Genesisy 1:26-28). Hamonjy ny taranak’i Adama Andriamanitra amin’ny alalan’ny “taranaky ny vehivavy” (Genesisy 3:15). Io faminaniana io dia "tsiambaratelo masina" nandritra ny taonjato maro (Marka 4:11; Romana 11:25, 16:25; 1 Korintiana 2: 1,7 "tsiambaratelo masina"). I Jehovah Andriamanitra dia nanambara izany tsikelikely nandritra ny taonjato maro. Ity no dikany:
(I Jesosy Kristy no mpanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra, napetrak'i Jehovah Andriamanitra Rainy tamin'ny 1914 (araka ny fandaharan'ny Baiboly ny faminaniana ao amin'ny Daniela toko faha-4))
(Olombelona 144000 ihany (lehilahy na vehivavy) no hanana fitsanganana any an-danitra ary hiara-manjaka amin'i Jesosy Kristy Mpanjaka any an-danitra, araka ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy toko 5,7 sy 14)
Ilay vehivavy: maneho ny vahoakan'Andriamanitra any an-danitra izy: "Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy nitafy masoandro, ary teo ambanin’ny tongony ny volana, ary nisy satroboninahitra kintana roa ambin’ny folo teo amin’ny lohany"(Apokalypsy 12:1). Io vehivavy io dia voalaza fa ny "Jerosalema avy any ambony": "Fa afaka kosa ilay Jerosalema any ambony, ary izy no renintsika" (Galatiana 4:26). Io vehivavy io dia voalaza fa ny "Jerosalema any an-danitra": "Fa ny hatoninareo kosa dia Tendrombohitra Ziona, sy tanànan’ilay Andriamanitra velona, izany hoe i Jerosalema any an-danitra; sy anjely an’alinalina" (Hebreo 12:22). Toa an'i Saraha, vadin'i Abrahama, io vehivavy any an-danitra io dia tsy niteraka (Genesisy 3:15): "Mihobia, ry vehivavy momba izay tsy niteraka! Mifalia sy mihobia ary mihorakoraha ianao izay tsy mba narary nihetsi-jaza! Fa ny zanaky ny vehivavy nilaozam-bady dia betsaka noho ny zanaky ny vehivavy manambady”, hoy i Jehovah" (Isaia 54:1). Ity faminaniana ity dia nanambara fa ity vehivavy any an-danitra ity dia hiteraka zaza maro (Jesosy Kristy Mpanjaka sy ireo mpanjaka sy mpisorona 144000).
Ny taranany ny vehivavy: Ny bokin'ny Apokalipsy dia manambara hoe iza io zanakalahy io: "Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy nitafy masoandro, ary teo ambanin’ny tongony ny volana, ary nisy satroboninahitra kintana roa ambin’ny folo teo amin’ny lohany, sady bevohoka izy. Ary nitaraina izy fa narary nihetsi-jaza efa ho teraka. (...) Ary tera-dahy ravehivavy, dia zazalahy hifehy ny firenena rehetra amin’ny tehim-by. Ary nentina haingana nankany amin’Andriamanitra sy ny seza fiandrianany ilay zanany” (Apokalypsy 12: 1,2,5). Zanaka io dia i Jesosy Kristy, amin'ny maha mpanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra: "Ho lehibe izy ka hantsoina hoe Zanaky ny Avo Indrindra, ary i Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan’i Davida rainy. Ary ho mpanjaka eo amin’ny taranak’i Jakoba mandrakizay izy, ary tsy hifarana mihitsy ny fanjakany" (Lioka 1:32,33, Salamo 2).
I Satana ilay menarana tany am-boalohany: "Koa natsipy mafy ilay dragona lehibe, ilay menarana tany am-boalohany, ilay antsoina hoe Devoly sy Satana, izay mamitaka ny tany rehetra misy mponina. Natsipy mafy tamin’ny tany izy, ary ny anjeliny koa niara-natsipy taminy” (Apokalypsy 12:9).
(Satana devoly, noroahina avy tany an-danitra tamin'ny 1914)
Ny taranaky ny menarana dia ireo fahavalo any an-danitra sy eto an-tany, ireo izay mazoto miady amin'ny fiandrianan'Andriamanitra, manohitra an'i Jesosy Kristy Mpanjaka sy amin'ireo olo-masina eto an-tany: "Ry bibilava, taranaky ny menarana, hataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin’ny Gehena? Noho izany no anirahako mpaminany sy olon-kendry ary mpampianatra ampahibemaso ho any aminareo. Ny sasany hovonoinareo ho faty sy hofantsihanareo amin’ny hazo fijaliana, ary ny sasany hokaravasinareo ao amin’ny synagoganareo sy henjehinareo isan-tanàna. Amin’izay dia hanody anareo ny ran’ny olo-marina rehetra nalatsaka teto ambonin’ny tany, nanomboka tamin’ny ran’i Abela olo-marina ka hatramin’ny ran’i Zakaria, zanak’i Barakia, izay novonoinareo teo anelanelan’ny toerana masina sy ny alitara" (Matio 23:33-35).
(Maro amin'ireo taranaky ny devoly no hanjavona mandritra ny fahoriana lehibe araka ny Apokalypsy 14 sy 19)
Ny ratra eo amin'ny voditongotr'ilay vehivavy dia ny fahafatesan'ny Zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy: "Ary tsy izany ihany, fa rehefa hitany fa nitovy tamin’ny olombelona izy, dia nanetry tena ka nanjary nankatò ary tonga hatramin’ny fahafatesana ny fankatoavany, eny, fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana" (Filipiana 2:8). Na izany aza, io ratram-paty io dia sitrana tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty: "fa novonoinareo kosa ilay Mpitarika Lehibe Indrindra izay manome fiainana. Kanefa Andriamanitra nanangana azy tamin’ny maty, ary vavolombelon’izany izahay" (Asan’ny Apostoly 3:15).
(Ny soron'i Kristy dia mamela ny famonjena ny olombelona (Jaona 3:16))
("Tokony hahatsiarovantsika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, isan-taona (voasoratra amin'ny teny malagasy))
Ny lohan'ilay bibilava torotoro dia ny fandringanana mandrakizay an'i Satana sy ny fahavalon'ny amin'Andriamanitra: "Ary tsy ho ela ilay Andriamanitry ny fiadanana dia hanorotoro an’i Satana eo ambany tongotrareo" (Romana 16:20). "Ary ny Devoly izay namitaka azy dia natsipy mafy tao amin’ny farihy afo sy solifara, izay efa nisy an’ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka. Dia " (Apokalypsy 20:10).
1 - Andriamanitra dia manao fanekena amin'i Abrahama
"Ary ny firenena rehetra eny ambonin’ny tany dia hanao izay hahazoany fitahiana amin’ny alalan’ny taranakao, satria nihaino ny teniko ianao"
Ny fanekena nataon'i Abrahama dia fampanantenana fa ny olombelona rehetra mankatò an'Andriamanitra, dia hotahina amin'ny alàlan'ny taranak'i Abrahama. Nanan-janakalahy, i Isaka, amin'ny i Saraha vadiny (nandritra ny fotoana ela tsy niteraka) (Genesisy 17:19). I Abrahama, i Sarà ary i Isaaka no mpandray anjara fototra amin'ny tantara an-tsehatra ara-paminaniana izay maneho, amin'ny fotoana iray, ny dikan'ny tsiambaratelo masina sy ny fomba izay hamonjen'Andriamanitra ny olombelona mankatò (Genesisy 3:15).
- Jehovah Andriamanitra izy maneho ilay Abrahama lehibe: "Fa ianao no Rainay. Na tsy fantatr’i Abrahama aza izahay ary na tsy fantatr’i Israely aza, dia ianao no Rainay, Jehovah ô! Ianao no Mpanavotra anay hatrizay hatrizay, ary izany no anaranao” (Isaia 63:16; Lioka 16:22).
(Jehovah no anaran'Andriamanitra)
(Tokony hivavaka amin'i Jehovah irery ihany isika (Matio 22: 37,38))
- Ny vehivavy avy any an-danitra dia i Saraha lehibe, tsy misy manan-janaka nandritra ny fotoana ela (Momba ny Genesisy 3:15): "Fa voasoratra hoe: “Mifalia, ry vehivavy momba izay tsy niteraka. Mihobia sy mihorakoraha, ry vehivavy tsy mba narary nihetsi-jaza. Fa ny zanaky ny vehivavy nilaozam-bady dia betsaka noho ny zanaky ny vehivavy manambady.” Isika, ry rahalahy, no zanaky ny fampanantenana toa an’i Isaka. Fa nanenjika an’ilay nateraka araka ny fanahy ilay nateraka araka ny nofo tamin’izany fotoana izany. Dia tahaka izany koa ankehitriny. Fa inona anefa no lazain’ny Soratra Masina? “Roahy any ilay mpanompovavy sy ny zanany, fa tsy hiray lova mihitsy amin’ny zanak’ilay vehivavy afaka ny zanak’ilay mpanompovavy.” Koa tsy zanaky ny mpanompovavy isika, ry rahalahy, fa zanaky ny vehivavy afaka" (Galatiana 4:27-31).
- Jesosy Kristy no Isaka lehibe, taranak'i Abrahama voalohany: "Tamin’i Abrahama sy tamin’ny taranany no nilazana ny fampanantenana. Tsy voalaza hoe: “Ary ho an’ireo taranaka”, toy ny milaza maro, fa toy ny milaza tokana, dia hoe: “Ary ho an’ny taranakao”, dia i Kristy izany" (Galatiana 3:16).
(Jesosy Kristy dia Zanak'i Jehovah Andriamanitra, lalana tokana mankany amin'ny famonjena mandrakizay (Jaona 14: 6))
- Ilay ratra tamin'ny ombelahin-tongotr'ilay vehivavy any an-danitra: Jehovah dia nangataka tamin'i Abrahama sorona an'isaka zanany. Tsy nandà i Abrahama (satria efa noheveriny fa hanangana an'Isaaka Andriamanitra hanangana ny aorian'ity sorona ity (Hebreo 11: 17-19)). Talohan'ilay sorona, dia nosakanan'Andriamanitra an'i Abrahama tsy hanao fihetsika tahaka izany. I Isaac dia nosoloana solo'ondry ondrilahy: "Tatỳ aoriana dia nizaha toetra an’i Abrahama Andriamanitra, ka niteny taminy hoe: “Ry Abrahama!” Dia hoy izy: “Intỳ aho!” Ary hoy Andriamanitra: “Ento, azafady, i Isaka zanakao, ilay lahitokanao izay tena tianao, ka mankanesa any amin’ny tany Moria. Ary atolory ho fanatitra dorana izy rehefa any, eo amin’ny tendrombohitra iray holazaiko anao.” (...) Farany dia tonga teo amin’ilay toerana nolazain’Andriamanitra taminy izy mianaka. Ary nanorina alitara teo i Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia nafatony ny tongotra aman-tanan’i Isaka zanany. Ary nataony teo ambonin’ny alitara izy, teo ambonin’ny kitay. Dia naninjitra ny tanany i Abrahama ka nandray ny antsin-kena mba hamonoana ny zanany. Niantso azy avy tany an-danitra anefa ilay anjelin’i Jehovah, nanao hoe: “Ry Abrahama! Ry Abrahama!” Dia hoy izy: “Intỳ aho!” Ary hoy ilay anjely: “Aza maninjitra ny tananao hamely ny zaza, ary aza manao na inona na inona aminy mihitsy. Fa fantatro tokoa izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, satria nafoinao ho ahy ny zanakao, ilay lahitokanao.” Tamin’izay dia nanopy ny masony i Abrahama ka nahita ondrilahy tsy dia lavitra teo, ary voasaringotry ny kirihitrala ny tandrok’ilay ondry. Dia nalain’i Abrahama ilay ondry, ka natolony ho fanatitra dorana ho solon-janany. Ary nataon’i Abrahama hoe Jehovah-jire ny anaran’ilay toerana. Izany no nahatonga an’ilay fiteny mahazatra ankehitriny hoe: “Any an-tendrombohitr’i Jehovah no hanomezana izany" (Genesisy 22:1-14). I Jehovah no nanao io sorona io, ilay Zanany Jesosy Kristy. Izay fisehoana ara-paminaniana io dia nanao nomeny fangirifiriana (namaky ilay andian-teny hoe "ny lahitokanao izay tianao indrindra"). Jehovah Andriamanitra, ilay Abrahama lehibe, nanao sorona izy an'i Jesosy Kristy zanany malala, ilay Isaka lehibe hahazoana famonjena maha-olombelona: "Fa lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay. (...) Izay maneho finoana ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatò ny Zanaka kosa tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy" (Jaona 3:16,36). Ny fahatanterahany farany ny teny fikasana natao tamin'i Abrahama dia hotanterahin'ny fitahiana mandrakizay ny olombelona manoa : "Tamin’izay aho dia nahare feo mafy avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha" (Apokalypsy 21:3,4).
(Ny olombelona dia ho afaka amin'ny aretina, fahanterana ary fahafatesana)
2 - Ny fifanekena ny famorana
"Ary nanao fifanekena tamin’i Abrahama koa izy, dia ny amin’ny famorana izany. Koa niteraka an’i Isaka i Abrahama ka namora azy tamin’ny andro fahavalo, ary Isaka niteraka an’i Jakoba, ary Jakoba niteraka azy roa ambin’ny folo lahy loham-pianakaviantsika"
(Asan’ny Apostoly 7:8)
Ny fanekena momba ny famorana dia ho famantarana ny vahoakan'Andriamanitra, tamin'izany fotoana izany ny Isiraely teto an-tany. Misy dikany ara-panahy io, izay voalahatra amin'ny lahatenin'i Mosesy veloma ao amin'ny bokin'ny Deoteronomia hoe: "Tsy maintsy hoforana ny fonao, fa aza manamafy ny hatokanao" (Deoteronomia 10:16). Ny famorana dia midika amin'ny nofo izay mifanaraka amin'ny fo ara-panoharana, satria izy tenany dia loharanon'aina, mankatò an'Andriamanitra: "Arovy ny fonao, mihoatra noho izay rehetra tokony harovana, fa avy ao aminy ny loharanon’aina” (Ohabolana 4:23).
(Fankatoavana an'Andriamanitra sy Jesoa Kristy Zanany, amin'ny alàlan'ny fahalalana marina ny sitrapony, voasoratra ao amin'ny Baiboly (Sal. 1: 2,3) (voasoratra amin'ny teny malagasy))
(Fankatoavana an'Andriamanitra sy Jesoa Kristy Zanany ary hahazoana fahamatorana ara-panahy)
Nahatakatra an'izany fampianarana fototra izany i Stefana. Hoy izy tamin’ny mpihaino azy izay tsy mino an’i Jesosy Kristy, na dia voafora ara-batana aza, tsy voafora ara-panahy ny fo: "Ry mafy hatoka, tsy voafora fo sy sofina! Manohitra ny fanahy masina foana ianareo. Ary tahaka ny nataon’ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza moa no mpaminany tsy nenjehin’ny razanareo? Eny, novonoiny mihitsy aza ireo nanambara mialoha fa ho avy Ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Ianareo no nandray ny Lalàna nampitain’ny anjely, nefa tsy nitandrina izany" (Asan’ny Apostoly 7:51-53). Novonoina izy, izay nanamafisana fa ireo mpamono olona ireo dia tsy voafora ara-panahy.
("Ny tsy voafora ara-panahy" dia ny tsy fankatoavana an 'Andriamanitra sy i Jesoa Kristy Zanany amin'ny alalan'ny fanaovana an-tsitrapo, izay voarara ao amin'ny Baiboly (jereo Fizarana 2) (voasoratra amin'ny teny malagasy))
Ny fo ara-panoharana dia mandrafitra ny anatiny ara-panahy ny olona iray, vita amin'ny fisainana miaraka miaraka amin'ny teny sy ny fihetsika (tsara na ratsy). Nohazavain’i Jesosy Kristy mazava tsara izay mahatonga ny olona ho madio na tsy madio, noho ny toetran’ny fony: "Izay mivoaka avy amin’ny vava kosa anefa dia avy ao am-po, ka izany no mandoto ny olona. Avy ao am-po, ohatra, no ivoahan’ny eritreri-dratsy, ny vonoan’olona, ny fanitsakitsaham-bady, ny fijangajangana, ny halatra, ny fijoroana ho vavolombelona mandainga, ary ny fanevatevana zava-masina. Izany no mandoto ny olona, fa ny mihinana amin’ny tanana tsy misasa tsy mandoto ny olona” (Matio 15:18-20). Jesosy Kristy dia mamaritra ny olombelona iray ao anatin'ny toe-tsaina tsy voafora ara-panahy, miaraka amin'ny fisainany ratsy, izay mahatonga azy tsy madio sy tsy mendrika hiaina (jereo ny Ohabolana 4:23). "Ny olona tsara dia mamoaka zavatra tsara avy amin’ny tahiry tsara ananany, fa ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka zavatra ratsy avy amin’ny tahiry ratsy ananany" (Matio 12:35). Ao amin'ny tapany voalohany amin'ny filazan'i Jesosy Kristy dia mamaritra ny olombelona iray izay manana fo voafora ara-panahy izy.
Ny Apôstôly Paoly koa dia nahatakatra izany fampianarana izany avy tamin'i Mosesy, sy avy eo amin'i Jesoa Kristy. Ny famorana ara-panahy dia ny fankatoavana an’Andriamanitra ary avy eo amin’i Jesosy Kristy Zanany: "Rehefa mitandrina ny lalàna ihany ianao vao mahasoa anao ny famorana. Fa raha mpandika lalàna kosa ianao, dia manjary tsy voafora indray ianao izay efa voafora io. Koa raha mitandrina ny zavatra ara-drariny takin’ny Lalàna ny olona tsy mifora, tsy efa anisan’ny voafora ihany ve izy na dia tsy mifora aza? Ary ny tsy mifora izay manatanteraka ny Lalàna, dia hanameloka anao izay mpandika lalàna na dia manana ny fehezan-dalàna an-tsoratra aza ianao sady voafora. Fa tsy izay miseho etỳ ivelany no maha Jiosy ny olona iray, ary tsy ny famorana azy eo amin’ny nofo no maha voafora azy. Fa ny ao anaty no maha Jiosy azy, ary voafora fo izy ka ny fanahy no namorana azy, fa tsy ny fehezan-dalàna an-tsoratra. Koa tsy avy amin’ny olona, fa avy amin’Andriamanitra, ny fiderana izany olona izany" (Romana 2:25-29).
Ny kristiana mahatoky dia tsy fehezin'ny Lalàna nomena an'i Mosesy intsony, ary noho izany dia tsy voatery hanao famorana ara-batana intsony izy, araka ny didim-pitsarana apôstôly voasoratra tao amin'ny Asan'ny Apostoly 15: 19,20,28,29. Izany dia hamafisin'ny zavatra nosoratana araka ny aingam-panahy, nataon'ny Apôstôly Paoly: "Fa Kristy no faran’ny Lalàna, mba hambara ho marina izay rehetra mino" (Romana 10: 4). "Misy voafora ve fony izy nantsoina? Aoka izy tsy ho lasa tsy mifora. Misy tsy mifora ve tamin’izy nantsoina? Aoka izy tsy hoforana. Tsy midika ho inona ny famorana, ary tsy midika ho inona ny tsy famorana, fa ny fitandremana ny didin’Andriamanitra no izy" (1 Korintiana 7:18,19). Hatramin'izao, ny kristiana dia tokony hanana famorana ara-panahy, izany hoe, mankatoa an'i Jehovah Andriamanitra ary mino ny soron'i Kristy (Jaona 3:16,36).
(Tsy fehezin'ny lalàna nomena an'i Mosesy intsony isika, fa io lalàna io dia manana lanja ara-paminaniana izay tanteraka amin'i Kristy, ao amin'ny fiangonana Kristiana, ary hotanterahina ao amin'ny paradisa an-tany ho avy, hoy ny Hebreo 10: 1, Kolosiana 2:17 sy Ezekiela 40-48)
Izay te-handray anjara amin'ny Paska dia tsy maintsy hoforana. Amin'izao fotoana izao, ny kristiana (na inona na inona fanantenany (any an-danitra na eto an-tany)) dia tokony hanana ny famorana ara-panahy ny fo alohan'ny hihinanana ny mofo tsy misy lalivay sy hisotro ny kaopy, ho fankalazana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy: "Aoka ny olona handini-tena tsara aloha raha mendrika, vao hihinana amin’ny mofo sy hisotro amin’ny kaopy" (1 Korintiana 11:28 ampitahao amin'ny Eksodosy 12:48 (Paska)).
(Tokony hahatsiarovantsika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy isan-taona. Ireo kristiana mahatoky rehetra, (na inona na inona ny fanantenany (lanitra na eto an-tany) dia tsy maintsy mandray anjara amin'ireo ny mariky ny vatana sy ny ran'i Kristy, hoy ny Jaona 6: 48-58 (voasoratra amin'ny teny malagasy))
3 - Ny fifanekena ny lalàna misy eo amin Andriamanitra sy ny Isiraely
"Koa tandremo sao hadinoinareo ny fifanekena nataon’i Jehovah Andriamanitrareo taminareo, ka manao sary sokitra ho anareo ianareo, dia bikabikan’ny zavatra rehetra nandraran’i Jehovah Andriamanitrareo anareo"
Ny mpanelanelana amin'io fanekena io dia i Mosesy: "Izaho no nodidian’i Jehovah tamin’izay fotoana izay hampianatra anareo fitsipika sy didim-pitsarana mba hankatoavinareo any amin’ilay tany halehanareo sy halainareo ho fanananareo” (Deoteronomia 4:14). Ity fanekena ity dia mifandray akaiky amin'ny fanekena ny famorana, izay tandindon'ny fankatoavana an'Andriamanitra (Deoteronomia 10:16 ampitahao amin'ny Romana 2:25-29). Ity fifanekena ity dia tapitra taorian'ny fiavian'ny Mesia: "Ary hataony manan-kery ho an’ny maro, mandritra ny herinandro, ny fifanekena. Hampitsahatra ny sorona sy ny fanatitra atao fanomezana izy, rehefa misasaka io herinandro io" (Daniela 9:27). Io fanekena io dia hosoloana fifanekena vaovao, araka ny faminanian'i Jeremia hoe: "Ho avy ny andro”, hoy i Jehovah, “izay hanaovako fifanekena vaovao amin’ny taranak’Israely sy ny taranak’i Joda. Tsy toy ilay fifanekena nataoko tamin’ny razany, tamin’ny andro nitantanako azy nivoaka avy tany Ejipta anefa izany. ‘Nivadika tamin’iny fifanekena nataoko iny mantsy izy ireo, na dia izaho aza no vadiny sy tompony’, hoy i Jehovah" (Jeremia 31:31,32).
Ny tanjon'ny Lalàna nomena ny Israely dia ny fanomanana ny vahoaka amin'ny fahatongavan'ny Mesia. Ny lalàna dia nampianatra ny filana fanafahana amin'ny fahotan'ny olombelona: "Koa tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra... Ary teo amin’izao tontolo izao ny fahotana mandra-pahatongan’ny Lalàna. Tsy misy olona ampangaina ho manota anefa rehefa tsy misy lalàna" (Romana 5:12,13). Ny lalàn'Andriamanitra dia naneho ny fahotan'ny olombelona. Naneho ny fahotan'ny olombelona rehetra izy: "Inona àry no holazaintsika? Ota ve ny Lalàna? Sanatria izany! Tsy ho nahafantatra ny ota anefa aho raha tsy noho ny Lalàna. Ohatra, tsy ho fantatro ny fitsiriritana, raha tsy ny Lalàna no nanao hoe: “Aza mitsiriritra.” Fa noho ny didy, dia nahita hirika hampisy fitsiriritana isan-karazany tato anatiko ny ota. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Raha ny marina, dia velona tsy nanan-dalàna aho fahiny. Rehefa tonga anefa ny didy, dia velona indray ny ota, fa izaho kosa maty. Ary ny didy izay natao hitondra fiainana, dia hitako fa, hay, natao hitondra fahafatesana. Fa noho ny didy koa, dia nahita hirika hamitahana ahy ny ota, ka namono ahy tamin’ny alalan’ny didy. Koa masina ny Lalàna, ary masina ny didy, sady ara-drariny no tsara" (Romana 7:7-12). Koa ny lalàna dia mpitaiza mitondra an'i Kristy: "Koa nanjary mpitaiza antsika àry ny Lalàna ka nitarika antsika ho amin’i Kristy, mba ho azo ambara ho marina isika noho ny finoana. Efa tonga anefa izao ny finoana, ka tsy fehezin’ny mpitaiza intsony isika" (Galatiana 3:24,25). Ny lalàn'Andriamanitra tonga lafatra, rehefa namaritra ny ota tamin'ny fandikana ny olona dia naneho ny filana sorona izay mitondra mankany amin'ny fanavotana ny zanak'olombelona noho ny finoany (fa tsy ny asan'ny lalàna). Io sorona io dia an'i Kristy: "Fa toy izany koa ny Zanak’olona: Tsy tonga mba hotompoina izy fa mba hanompo, ka hanome ny ainy ho vidim-panavotana ho takalon’ny maro" (Matio 20:28).
Na dia i Kristy aza no faran'ny lalàna, izy mbola mijanona ankehitriny ny fananana lanja ara-paminaniana izay ahafahantsika mahazo ny hevitr'Andriamanitra (amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy) momba ny ho avy: "Koa satria aloky ny zavatra tsara ho avy ny Lalàna fa tsy ny tena izy" (Hebreo 10: 1, 1 Korintiana 2:16). I Jesoa Kristy no hahatonga ireo "zavatra tsara" ireo ho tonga zava-misy: "Fa aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tena izy dia an’i Kristy" (Kolosiana 2:17).
4 - Ny fifanekena vaovao eo anelanelan’Andrimanitra sy Isiraelin’Andriamanitra
"Ary enga anie ny fiadanana sy ny famindram-po ho amin’izay rehetra hanaraka tsara an’ity fitsipi-pitondran-tena ity, eny, ho amin’ny Israelin’Andriamanitra!"
I Jesoa Kristy no mpanelanelana amin'ny fanekena vaovao: "Iray ny Andriamanitra ary iray ny mpanelanelana amin’Andriamanitra sy ny olona, dia olona iray atao hoe Kristy Jesosy" (1 Timoty 2:5). Ity fifanekena vaovao ity dia nahatanteraka ny faminanian'ny Jeremia 31:31,32. Ny 1 Timoty 2: 5 dia manondro ny olona rehetra izay mino ny soron'i Kristy (Jaona 3:16). Ny "Israelin'Andriamanitra" dia maneho ny fitambaran'ny fiangonana kristianina. Na izany aza dia nasehon'i Jesosy Kristy fa "Israelin’Andriamanitra" izany any an-danitra sy et earth an-tany.
Ilay "Israelin'Andriamanitra" any an-danitra dia ny 144000, ny Jerosalema Vaovao, izay renivohitra izay hananana fahefana an'Andriamanitra, avy any an-danitra, et on an-tany (Apokalypsy 7: 3-8: Ilay "Israelin'Andriamanitra" any an-danitra ny foko 12 avy amin'ny 12000 = 144000): "Hitako koa ilay tanàna masina, dia i Jerosalema Vaovao, nidina avy any an-danitra avy any amin’Andriamanitra sady efa voaomana tahaka ny ampakarina mihaingo hihaona amin’ny vadiny" (Apokalypsy 21:2).
Ny "Israelin'Andriamanitra" eto an-tany dia hahitana olona hiaina ao amin'ny paradisa an-tany ho avy, notendren'i Jesosy Kristy ho foko 12 amin'ny Isiraely hotsaraina: "Dia hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa amin’ny fotoanan’ny fanavaozana, dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany be voninahitra ny Zanak’olona. Amin’izay fotoana izay dia hipetraka eo ambony seza fiandrianana roa ambin’ny folo koa ianareo izay efa nanaraka ahy, ka hitsara ny foko roa ambin’ny folon’ny Israely" (Matio 19:28). Ity Isiraely ara-panahy eto an-tany ity koa dia voalaza ao amin'ny faminanian'ny Ezekiela toko 40-48.
(Hisy ny vahoaka be izay ho tafita velona amin'ny fahoriana lehibe ary maneho ny ampahatelon'ny olombelona ankehitriny araka ny faminanian'ny Zakaria 13: 8 ary Apokalypsy 7: 9-17)
(Hisy fitsanganana amin'ny maty eto an-tany)
(Hotsaraina ny tsy marina)
Amin'izao fotoana izao, ny Isiraelin'Andriamanitra dia ahitana kristiana mahatoky izay manana ny fanantenana any an-danitra sy ny kristiana manana fanantenana eto an-tany (Apokalypsy 7: 9-17).
(Io "Isiraely n'Andriamanitra" io dia ny fiangonana kristiana mivavaka amin'i Jehovah sy manompo an'i Jesosy Kristy Mpanjaka)
Amin'ny Paska farany, dia nankalaza ny nahaterahan'ity fanekena vaovao ity niaraka tamin'ny apôstôly nahatoky izay niaraka taminy i Jesoa Kristy: "Dia nandray mofo koa izy ary nisaotra an’Andriamanitra. Ary notapahiny ilay mofo, ka nomeny azy ireo, sady hoy izy: “Ity no vatako izay homena ho anareo. Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.” Toy izany koa no nataony tamin’ny kaopy, rehefa avy nihinana ny sakafo hariva izy ireo. Dia hoy izy: “Ity kaopy ity no fifanekena vaovao miorina amin’ny rako, izay halatsaka ho anareo" (Lioka 22:19,20).
Io fifanekena vaovao io dia mahakasika ny kristiana mahatoky rehetra, na inona na inona "fanantenany" (lanitra na an-tany) Ity fanekena vaovao ity dia mifandray akaiky amin'ny "famorana ara-panahy amin'ny fo" (Romana 2: 25-29). Raha mbola manana io "famorana ara-panahy io" ny kristiana mahatoky, dia afaka mihinana ny mofo tsy misy lalivay izy ary misotro amin'ny kaopy izay maneho ny ran'ny fanekena vaovao (na inona na inona fanantenany (na lanitra na et earthly an-tany)): "Aoka ny olona handini-tena tsara aloha raha mendrika, vao hihinana amin’ny mofo sy hisotro amin’ny kaopy” (1 Korintiana 11:28).
5 - Ny fanekena ho amin'ny Fanjakana iray: eo anelanelan'i Jehovah sy Jesosy Kristy ary eo amin'i Jesosy Kristy sy ny 144000
"Ary ianareo no nifikitra tamiko tao anatin’ireo fitsapana nahazo ahy. Koa manao fifanekena aminareo aho, toy ny nanaovan’ny Raiko fifanekena tamiko, ho amin’ny fanjakana, mba hihinana sy hisotro eo amin’ny latabatro ao amin’ny fanjakako ianareo, ka hipetraka eo amin’ny seza fiandrianana hitsara ny foko roa ambin’ny folon’ny Israely"
Io fifanekena io dia natao tamin'io alina io izay nankalazain'i Jesoa Kristy ny nahaterahan'ny fanekena vaovao. Tsy mitovy ny ireo. Ny fifanekena ho amin'ny fanjakana dia eo amin'i Jehovah sy Jesosy Kristy ary avy eo i Jesosy Kristy sy ny 144000 izay hanjaka any an-danitra ho mpanjaka sy mpisorona (Apokalypsy 5:10; 7:3-8; 14:1-5).
Ny fifanekena ho amin'ny fanjakana iray izay nataon'Andriamanitra sy Kristy dia fanitarana ny fanekena nataon'Andriamanitra, miaraka amin'i David Mpanjaka sy ny fanjakany. Io fanekena io dia fampanantenan'Andriamanitra momba ny faharetan'ny fianakavian'i Davida. Jesosy Kristy dia miaraka amin'izay, ilay taranak'i Davida Mpanjaka eto an-tany, ary ny mpanjaka napetrak'i Jehovah (tamin'ny 1914), ho fanatanterahana ny fanekena ho amin'ny Fanjakana iray (2 Samoela 7:12-16; Matio 1:1-16, Lioka 3:23-38, Salamo 2).
Ny fifanekena ho amin'ny fanjakana iray izay natao teo anelanelan'i Jesosy Kristy sy ny apôstôliny ary tamin'ny alàlan'ny fanitarana ilay 144000, raha ny marina, dia fampanantenan'ny fanambadiana any an-danitra, alohan'ny fahoriana lehibe: "Aoka isika hifaly sy hiravoravo, ary aoka isika hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry sady efa niomana ny vadiny. Eny, navela hanao akanjo vita amin’ny lamba rongony mamirapiratra sy madio ary tena tsara ravehivavy. Tsy inona ilay lamba rongony tena tsara fa ny asa marina nataon’ny olona masina" (Apokalypsy 19:7,8). Ny Salamo 45 dia mamaritra ny fanambadiana any an-danitra eo anelanelan'i Jesosy Kristy Mpanjaka sy ny vadin'ny mpanjaka, ilay Jerosalema Vaovao (Apokalypsy 21:2).
Avy amin'io fanambadiana io dia hateraka zanaky ny fanjakana, andriana izay ho solontena eto an-tany amin'ny fahefan'ny mpanjaka any an-danitra ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra: "Hisolo toerana an’ireo razanao ny zanakao, Izay hotendrenao ho andriana manerana ny tany" (Salamo 45:16, Isaia 32:1,2).
(Ny faminaniana ao amin'ny Ezekiela toko 40-48 dia mamaritra ny anjara asan'ireo andriana eto an-tany)
(Ny faminaniana ao amin'ny Ezekiela toko 40-48, dia koa ny anjara asan'ny mpisorona ho eto an-tany)
Ireo fitahiana mandrakizay amin'ny fanekena vaovao sy ny fanekena ho amin'ny Fanjakana iray, dia hanatanteraka ny fanekena nataon'i Abrahama izay hitahy ny firenena rehetra ary mandritra ny mandrakizay. Ny fampanantenan'Andriamanitra dia ho tanteraka tanteraka: "Izany fahafoizan-tena izany dia miorina amin’ny fanantenana fiainana mandrakizay, izay nampanantenain’Andriamanitra tsy mahay mandainga, eny, efa nampanantenainy hatry ny ela be" (Titosy 1:2).
(Ireo fitahian'ny fanafahana ny olombelona)
(Ireo fitahian'ny fitsanganana any an-danitra)
(Ireo fitahian'ny fitsanganana amin'ny maty eto an-tany)
(Ireo fitahiana avy amin'ny fitantanana eto an-tany ny Fanjakan'Andriamanitra)